खोक्रो राष्ट्रवादको भ्रममा जनता !
May 17, 2017 Posted by Jhilko.com
काठमाडौं । ०४६ सालको जनआन्दोलनका कमाण्डर थिए, नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह । जनआन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले उनलाई दरबार बोलाएर प्रधानमन्त्री बन्न भने । सिंहले आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने र आफ्नो स्थानमा कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सुझाए । राजाले पनि सिंहकै आग्रह बमोजिम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । ०४६ सालमा सिंहको निर्देशनमा लाखौं काठमार्डौैवासी सडकमा उत्रिएका थिए । त्यसैले नै जनआन्दोलन भएको दुई महिना नबित्...बाँकी
काठमाडौँ महानगरमा एमालेको, चन्द्रागिरि नगरपालिकामा काँग्रेसको अग्रता
३ जेठ, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा (एमाले) ले अग्रता कायमै राखेको छ । प्रमुखका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले एक हजार ३३ मत पाएको छ भने नेपाली काँग्रेसका राजुराज जोशीले ८४० मतका साथ पछ्याइरहेका छन । विवेकशील नेपाली पार्टीकी रञ्जु दर्शना न्यौपानेले ५०१ र साझा पार्टीका किशोर थापाले ३८५ मत प्राप्त गरेका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपेन्द्र अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार उपप्रमुखमा काँग्रेसकी हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले ९४२ मतका साथ अग्रता कायम गरिरहेकी छन । ...बाँकी
स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपाले किन हा¥यो ?
काठमाडौं । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) एक नम्बर हुने संकेत देखिएको छ । यद्यपि धेरै ठाउँमा मत गणना हुन बाँकी नै रहेकाले र तीब्र प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग परिरहेकाले नेका एक नम्बर पनि हुनसक्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) तेस्रो हुने स्पष्ट संकेत देखिइसकेको छ । शहरमा ऊ कमजोर भए पनि माओवादी केन्द्र ग्रामिण क्षेत्रमा आफ्नो पुरानो आधारमा बलियो सावित गरेको छ । २०७० सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट खुम्चेको र निरा...बाँकी
भक्तपुर जिल्लाका नगरपालिकाहरुको हालसम्मको मतपरिणाम
काठमाडौं । मध्यपुरथिमि नगरपालिका वडा नं २ को अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार राम थापामगरको टोली विजयी भएको छ । थापामगरले ८३२ मत ल्याई अध्यक्षमा विजयी भएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले)का हेमराज गौतमले ६७० मत ल्याएका थिए । त्यसैगरी, महिला सदस्यमा एमालेका उम्मेदवार सकुन्तला श्रेष्ठ विजयी भएकी छन् भने दलित महिला सदस्यतर्फ एमाले कै अम्बिका रजक निर्विरोध विजयी भएकी छन् । सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका प्रल्हाद कार्की र विदुर भट्टराई विजयी भएका छन् । यसअघ...बाँकी
महिलाले खाता खोले : पहिलो गाउँपालिका अध्यक्षमा महिला विजयी
३ जेठ, नवलपरासी । नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सम्भवतः नेपालमा पहिलो पटक महिला उम्मेदवार विजयी भएकी छन् । नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी लक्ष्मी पाण्डेले कुल चार हजार ५९२ मत प्राप्त गरी विजयी बनेकी हुन् भने उनकी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा ९एमाले०का उम्मेदवार मेघबहादुर पुलामीले चार हजार ३५८ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । त्यसैगरी, उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार कोपिला मल्ल कुल चार हजार ४६८ मत प्राप्त गरी विजयी बनेकी छन् छन भने उनका...बाँकी
निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा आवश्यकः नारायणकाजी श्रेष्ठ
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीमा निर्वाचनको बारेमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन । ‘निर्वाचनमा धेरै विषय छन, यसका बारेमा मिटिङमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ’ भन्दै श्रेष्ठले झिल्कोसँग कुरा गर्दै भने, ‘मत परिणामका बारेमा प्रारम्भिक अवस्था भएकाले अहिले केही बोल्दिन । नेता नारायणकाजीले थप भने– ‘निर्वाचनमा हामीले धेरै जित्ने अपेक्षा गरेका थिएनौं, फेरि परिणामका बारेमा बोलिहाल्ने अवस्था पनि छैन ।’...बाँकी
माओवादीको एजेण्डा विजय
काठमाडौं । माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको चुनावमा तेस्रो मात्र बन्ने लक्षण देखियो, पहिलो या दोस्रो स्थानमा आउने सम्भावना कमजोर भएको छ । तैपनि माओवादीका केन्द्रदेखि गाउँ जिल्ला तहसम्मका नेता कार्यकर्ताहरु प्रशन्न देखिन्छन्, उनीहरुमा भरपूर आत्मविश्वाश देखिन्छ । यसको कारण हो माओवादीले अपूर्व नैतिक विजय हासिल गरेको छ, माओवादीको एजेण्डाले जितेको छ । चुनाव हुनु आफैमा माओवादीको विजय थियो, नभन्दै माओवादीले जितेको छ । नेपालमा जसको नीति उसकै नेतृत्व कहिल्यै भएन, यदाकदा भए पनि त्यसले स्थायित्व पाएन...बाँकी
सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकामा कांग्रेसका पुष्प कार्की विजयी
राजन गाउँले सिन्धुली २, जेठ । सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका पुष्प कार्की विजयी भएका छन । कार्कीले ३३७६ मत प्राप्त गरी विजयी भएको निर्वाचन अधिकृत पुरुषोत्तम अधिकारीले जानकारी दिए । कार्कीले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका गाउँपालिका अध्यक्षका उमेदवार टीकाबहादुर देवकोटालाई ७८३ मत अन्तरले पछि पार्दै कार्कीले जितेका हुन । देवकोटाले २५८४ मत प्राप्त गरेका थिए । गाउँपालिका उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसकै गंगादेवी श्रेष्ठ विजयी भइन । श्रेष्ठ ३२८७ मत ल...बाँकी
ललितपुरको कोन्ज्जोसोम गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र बिजयी
ललितपुर । ललितपुरको कोन्ज्जोसोम गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा माओवादी केन्द्रका उमेदवार विजयी भएका छन् । गाउँपालिका प्रमुखमा विजयी गोपिलाल स्याङतानले १७९८ मत प्राप्त गरेका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका उमेदवार राजन घिमिरेले १७३२ प्राप्त गरेका छन् । एमालेका उमेदवार कृष्णमान लामाले भने १०८० मत प्राप्त गरे । उपप्रमुख पदमा विजयी माओवादी केन्द्रको उमेदवार मिम्मा लामाले १९३३ मत प्राप्त गरिन् भने निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका सुष्मिता दुलालले १४५७ मत प्राप्त गरिन् । नेकाको...बाँकी
भरतपुरमा एक वडा गनियो, वडा अध्यक्षमा नेका विजयी
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको एक नम्बर वडाको मतदान सकिएको छ । एक नम्बर वडामा नेकपा एमालेका उमेदवार देवी ज्ञवालीले १५१३ मत ल्याएका छन भने माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले ११३५ मत ल्याएकी छिन । उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी उमेदवारले १४०१ र एमालेकी उमेदवारले ११८८ ल्याएकी छिन । एक नम्बर वडामा नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्षले ११७७ मत ल्याई विजय हासिल गरेका छन । निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका उमेदवारले ११५९ मत ल्याएका थिए । प्रारम्भमा एमालेले अग्रता लिएकोमा पछि कांग्रेसले जितेका थिए ।...बाँकी